Puntland oo u hanjabtay dad hurinaya colaada Gobolka Mudug – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowlad Goboleedka Puntland ayaa baaqnabadeed kasoo saaray cooladda kasoo cusboonaatay aaga degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug,taas oo u dhaxeysa laba maleeshiyo Beeleed.
Qoraal kasoo baxay Madaxtooyada Maamulka Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in Puntland ay ka walaacsan tahay colaada gobolka Mudug,isla markaana ay ku baaqeyso in si deg deg ah loo joojiyo.
Sidoo kale qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in Puntland ay u digeyso dadka ka qeyb qaadanaya hurinta Colaadaas,iyada oo sidoo kale Odayaasha iyo Culima’udiinka Gobolka Mudug ugu baaqday inay ka qeyb qaataan joojinta colaada iyo ilaalinta Colaada.
Dgaalkii shalay markale labada maleeshiyo Beeleed ku dhex-maray duleedka degmada Towfiiq ee Gobolka Mudug ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen in ka badan 20 Ruux.